Tartanka Guddoomiyaha Gobolka: Halka ay musharraxiinta guddoomiyaha gobolku ka taaganyihiin daryeelka caafimaadka iyo socdaalka
By Cody Nelson | MPR News [Read the story in English]
Afar nin ayaa isku dayaya inay buuxiyaan aqalka guddoomiyaha gobolka iyadoo uu DFLer Mark Dayton oo labo goor doorashada helay isu diyaarinayo inuu ka tago xafiiska.
Hoggaamiyeyaasha tartanka waa Jeff Johnson, Guddoomiyaha Degmo-weynta Hennepin ee Jamhuuriga ah, iyo Xildhibaanka Dimoqraadiga ah Tim Walz, oo aqalka Maraykanka ku matala koonfurta Minnesota badankeed.
Laba musharrax oo ka mid ah xisbiyada yaryar ayaa iyaguna sidoo kale tartamaya: Libertarian Josh Welter iyo Chris Wright oo ka tirsan kooxda Dhaqdhaqaaqa Asaasiga ah ee Sharciyeynta Xashiihska.
MPR News waxay baadhis ku samaysay musharrixiintu halkay ka taagan yihiin dhowr arrimood oo muhiim ah oo ku salaysan fikradaha ay ku tartamayaan iyo hadallada kale ee ay dadweynaha ka dhex sheegeen.
Johnson: Waxa uu ka soo horjeedaa Affordable Care Act wuxuuna MNsure ku tilmaamay "masiibo dhameystiran." Johnson wuxuu doonayaa Minnesota inay laasho qaybo ka mid ah ACA oo hoos yimaada shuruudaha federaalka waxaana uu doonayaa inuu abuuro nidaam iibsashada caymiska guud ee dowlad-goboleedyada u dhexeeya taasoo ah hab lagu xoojiyo tartanka suuqa caymiska.
Walz: Walz wuxuu rumeysan yahay "nidaamka lacag-bixinta mideysan inay u soo dhowdahay Minnesota." Wuxuu taageeraa daryeelka caafimaadka dadweynaha ee loogu talagalay dadka dakhligoodu hooseeyo, MinnesotaCare, in loo fidiyo dhammaan dadka reer Minnesota, haddii ay doortaan inay iibsadaan.
Welter: Welter ma taageerayo wax khidmo cusub ama canshuur ah oo lagu bixinayo arrimaha caafimaadka la xiriira.
Wright: Wuxuu jecel yahay nidaam daryeel caafimaad oo hal-lacag-bixiye ah wuxuuna doonayaa Minnesota in ay ka baxdo MNsure iyo Affordable Care Act oo sameeysato nidaamka hal-bixiye. Wright ayaa sidoo kale dhaleeceeya "khasaarinta, khayaanada iyo xadgudubka" daryeelka caafimaadka.
Johnson: Johnson wuxuu doonayaa in sharci-fuliyaasha maxalliga ah awood u yeeshaan inay kala shaqeeyaan masuuliyiinta federaalka ah hirgelinta xakameeynta haajirka wuxuuna ka soo horjeeda siyaasadaha "magan-gelinta". Wuxuu sidoo kale sheegay in barnaamijka dib-u-dejinta qaxootiga ee federaalku uu "noqday mid ku kodhiyay kala qaybsanaanta iyo dhibaatada" Minnesota waxana uu raadin doonaa in si degdeg ah loo hakiyo barnaamijka.
Walz: Walz wuxuu aaminsanyahay in sharci-fuliyayaasha maxalliga ah aan loo xilsaarin fulinta sharciyada federaalka ee socdaalka, taas oo ay ku dhaqmaan goobaha maamul ee lagu magaacabo megen-gelinta. Waxa kale oo uu taageersan yahay ilaalinta dadka carruur ahaan lagu keenay Mareykanka iyagoo aan lahayn dukumiinti.
Welter: Welter wuxuu sheegay inay taay in Maraykanku furo xudduudihiisa oo uu u oggolaado in dad badan ay soo galaan dalka.
Wright: Wright ayaan u muuqan in uu leeyahay fikrad shaacsan oo ku aaddan socdaalka. MPR News ayaa codasaday faallo wuxuuna beddelayaa qoraalkan haddii uu ololuhu ka soo jawaabo.
by Sara Porter, MPR News 10/15/2018 8:54:03 PM